ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ.. ဘယ်သွားမလို့လဲ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ.. ဘယ်သွားမလို့လဲ
Apann Pyay 12:29 AM ဗဟုသုတအစုံ Edit
အစောင့်ရဲဘော်လေးက မေးလိုက်သည်..။ ပုံပန်းကိုလည်းကြည့်ပါဦးလေ..။ ခေါင်းမွေးတွေက စုတ်ဖွာ..၊ မေးရိုးကားကား မျက်စိပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း ၀တ်ထားတာကလည်း စွပ်ကျယ်လက်တို တစ်ပတ်ရစ်ယောပုဆိုး..၊ သဲကြိုးနီ လေယာဉ်ပျံဖိနပ်နှင့် ပိန်ကပ်ကပ် မွဲခြောက်ခြောက်….
“ကျုပ် ဗိုလ်အောင် နဲ့ တွေ့ချင်လို့ပါ..”
ရုံးကိစ္စလား အိမ်ကိစ္စလား ဆိုတော့ “အိမ်မှာတွေ့ပြီး ပြောမှဖြစ်မယ့် ရုံးကိစ္စပဲ..”တဲ့..။
ထိုသူသည်ပြောပြောဆိုဆို နှင့် ခြံအတွင်းသို့ ဇွတ်ကြီးဝင်ချလာ၍ အစောင့်ရဲဘော်လေးက ထိုသူကို လက်မောင်းရင်း ဆွဲထုတ်ကာ ခြံဝသို့ဆွဲထုတ်လိုက်သည်..။
တစ်ဆက်တည်း မာန်မဲကြိမ်းမောင်း လိုက်ပါသေးသည်..။ သို့သော် ထိုလူက အပြုံးမပျက်..။ “ခင်ဗျား..ဘယ်လိုလူလဲ.. ခင်ဗျားဘာကောင်လဲ.. ဒီလိုဗိုလ်မှုး တစ်ယောက်အိမ်ကို အရမ်းဝင်ချင်သလို ၀င်လို့ရမလား.. ခင်ဗျားကို ဘယ်သူဝင်ခွင့်ပေးလို့လဲ..” အထိ..စကားလုံးတွေ ဒီရေမြင့်တက်ခဲ့သည်..။ ထိုအခါမှ ထိုသူကဆို၏…။
“ကျုပ် အောင်ဆန်းပါ..ရဲဘော်တို့ ကင်းဗိုလ်ကိုခေါ်လိုက်ပါ..။ ကျုပ်သူနဲ့တွေ့မယ်..”..ဆိုတော့…
ရဲဘော်လေးအဖို့ ငယ်ထိပ်မြွေပေါက်လေပြီပေါ့..။ ချက်ချင်းခေါင်းနပန်းကြီးသွားပြီး ကင်းဗိုလ်ကိုပြေးခေါ်ရသည်..။ ဒရောသောပါး ရောက်လာသော ကင်းဗိုလ်က ပျာပျာသလဲဖြင့် “ဟာ..ဗိုလ်ချုပ် ရေတွေစိုလို့ပါလား.. ကြွပါ ဗိုလ်ချုပ် အထဲကိုကြွပါ..” ဆိုသဖြင့် ရဲဘော်လေးအဖို့ ခေါင်းပင်ချာချာလည်သွားလေသည်..။
သွားပြီ..နားထင်နာရင်းတွေ ချက်ချင်းထူပူလာသည်..။ သေနတ်ကိုင်ထားသော လက်ပင် တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်လို့.. သူ့ကိုသူ
မကြာမီ သူတို့ကင်းဗိုလ် ရောက်လာပြီး ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာ “မင်းငါနဲ့ လိုက်ခဲ့.. ဗိုလ်ချုပ်က မင်းကိုခေါ်ခိုင်းလို့..” ဆိုသောအခါ သူ့နဖူးကို သူ့လက်နှင့်ရိုက်၍ ဟိုက် ငါတော့သွားပြီ ဟု ရေရွတ်ညည်းတွားမိလေသည်..။ ဧည့်ခန်းထဲတွင် စန္ဒယားခုံကိုမှီ၍ လက်ပိုက်ရပ်နေသော ဗိုလ်ချုပ်က သူ့နာမည်ကိုမေးသည်..။ တပ်ထဲဝင်တာ မကြာသေးဘူး ထင်တယ်လို့ ဆိုကာ…
“ရဲဘော်.. ရဲဘော်ရဲ့ တာဝန်ကျေမှုကို ချီးကျူးပါတယ်..။ စောစောက ကိစ္စကိုဘာမှ ခေါင်းထဲ မထည့်နဲ့တော့..။ ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာပဲ..၊ ရဲဘော်မှန်တယ်..။ အေးတစ်ခုတော့ သတိထား..၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါတော့ မလုပ်နဲ့..၊ အဲ့ဒါပဲ.. ကဲ..သွားနိုင်ပါပြီ..” တဲ့…။
ကဲ..ထူးဆန်းမနေဘူးလား..။ ပါးရိုက်ခံရဖွယ်ရှိသော်လည်း.. တာဝန်နှင့် ၀တ္တရားအပေါ် ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်သော ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးရဲ့ ရပ်တည်ခွင့်လွတ်စိတ်ကကော ကြည်ညိုလေးစားဖွယ် မကောင်းဘူးလား..။ ထို အစောင့်ရဲဘော်လေးမှာ နောင်အခါ စာရေးဆရာ “မြ၀တီ ရဲခေါင်” အမည်ဖြင့် ကျော်ကြားလာသူပင်ဖြစ်သည်…။
Credit to Ko Nay Myo
အစောငျ့ရဲဘျောလေးက မေးလိုကျသညျ..။ ပုံပနျးကိုလညျးကွညျ့ပါဦးလေ..။ ခေါငျးမှေးတှကေ စုတျဖှာ..၊ မေးရိုးကားကား မကျြစိပေါကျကဉျြးကဉျြး ဝတျထားတာကလညျး စှပျကယျြလကျတို တဈပတျရဈယောပုဆိုး..၊ သဲကွိုးနီ လယောဉျပြံဖိနပျနှငျ့ ပိနျကပျကပျ မှဲခွောကျခွောကျ….
“ကြုပျ ဗိုလျအောငျ နဲ့ တှခေ့ငျြလို့ပါ..”
ရုံးကိစ်စလား အိမျကိစ်စလား ဆိုတော့ “အိမျမှာတှပွေီ့း ပွောမှဖွဈမယျ့ ရုံးကိစ်စပဲ..”တဲ့..။
ထိုသူသညျပွောပွောဆိုဆို နှငျ့ ခွံအတှငျးသို့ ဇှတျကွီးဝငျခလြာ၍ အစောငျ့ရဲဘျောလေးက ထိုသူကို လကျမောငျးရငျး ဆှဲထုတျကာ ခွံဝသို့ဆှဲထုတျလိုကျသညျ..။
တဈဆကျတညျး မာနျမဲကွိမျးမောငျး လိုကျပါသေးသညျ..။ သို့သျော ထိုလူက အပွုံးမပကျြ..။ “ခငျဗြား..ဘယျလိုလူလဲ.. ခငျဗြားဘာကောငျလဲ.. ဒီလိုဗိုလျမှုး တဈယောကျအိမျကို အရမျးဝငျခငျြသလို ဝငျလို့ရမလား.. ခငျဗြားကို ဘယျသူဝငျခှငျ့ပေးလို့လဲ..” အထိ..စကားလုံးတှေ ဒီရမွေငျ့တကျခဲ့သညျ..။ ထိုအခါမှ ထိုသူကဆို၏…။
“ကြုပျ အောငျဆနျးပါ..ရဲဘျောတို့ ကငျးဗိုလျကိုချေါလိုကျပါ..။ ကြုပျသူနဲ့တှမေ့ယျ..”..ဆိုတော့…
ရဲဘျောလေးအဖို့ ငယျထိပျမွှပေေါကျလပွေီပေါ့..။ ခကျြခငျြးခေါငျးနပနျးကွီးသှားပွီး ကငျးဗိုလျကိုပွေးချေါရသညျ..။ ဒရောသောပါး ရောကျလာသော ကငျးဗိုလျက ပြာပြာသလဲဖွငျ့ “ဟာ..ဗိုလျခြုပျ ရတှေစေိုလို့ပါလား.. ကွှပါ ဗိုလျခြုပျ အထဲကိုကွှပါ..” ဆိုသဖွငျ့ ရဲဘျောလေးအဖို့ ခေါငျးပငျခြာခြာလညျသှားလသေညျ..။
သှားပွီ..နားထငျနာရငျးတှေ ခကျြခငျြးထူပူလာသညျ..။ သနေတျကိုငျထားသော လကျပငျ တဈဆတျဆတျတုနျလို့.. သူ့ကိုသူ
မကွာမီ သူတို့ကငျးဗိုလျ ရောကျလာပွီး ဆူပူကွိမျးမောငျးကာ “မငျးငါနဲ့ လိုကျခဲ့.. ဗိုလျခြုပျက မငျးကိုချေါခိုငျးလို့..” ဆိုသောအခါ သူ့နဖူးကို သူ့လကျနှငျ့ရိုကျ၍ ဟိုကျ ငါတော့သှားပွီ ဟု ရရှေတျညညျးတှားမိလသေညျ..။ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ စန်ဒယားခုံကိုမှီ၍ လကျပိုကျရပျနသေော ဗိုလျခြုပျက သူ့နာမညျကိုမေးသညျ..။ တပျထဲဝငျတာ မကွာသေးဘူး ထငျတယျလို့ ဆိုကာ…
“ရဲဘျော.. ရဲဘျောရဲ့ တာဝနျကမြှေုကို ခြီးကြူးပါတယျ..။ စောစောက ကိစ်စကိုဘာမှ ခေါငျးထဲ မထညျ့နဲ့တော့..။ ဒီအခြိနျမှာ ဒီလိုပဲ လုပျရမှာပဲ..၊ ရဲဘျောမှနျတယျ..။ အေးတဈခုတော့ သတိထား..၊ စိတျလိုကျမာနျပါတော့ မလုပျနဲ့..၊ အဲ့ဒါပဲ.. ကဲ..သှားနိုငျပါပွီ..” တဲ့…။
ကဲ..ထူးဆနျးမနဘေူးလား..။ ပါးရိုကျခံရဖှယျရှိသျောလညျး.. တာဝနျနှငျ့ ဝတ်တရားအပျေါ ကောငျးစှာ နားလညျသဘောပေါကျသော ခေါငျးဆောငျ တဈဦးရဲ့ ရပျတညျခှငျ့လှတျစိတျကကော ကွညျညိုလေးစားဖှယျ မကောငျးဘူးလား..။ ထို အစောငျ့ရဲဘျောလေးမှာ နောငျအခါ စာရေးဆရာ “မွဝတီ ရဲခေါငျ” အမညျဖွငျ့ ကြျောကွားလာသူပငျဖွဈသညျ…။